ပုဂ္ဂလိကဂျက်ပဋိညာဉ်စာတမ်း 2018 မာစတာသြဂတ်အမျိုးသားဂေါက်ကလပ်ပြိုင်ပွဲ
အဆိုပါမာစတာဂေါက်သီးရဲ့အကြီးမားဆုံးနှင့်အရေးပါဆုံးပြိုင်ပွဲအဖြစ်စဉ်းစားသည်. သြဂတ်မှာနှစ်စဉ်ကျင်းပ, ဂျော်ဂျီယာ, ဒီဖြစ်ရပ်ဂိမ်းရဲ့အကောင်းဆုံးကစားသမားအချို့ကိုအတူတကွဆောင်တတ်၏, ဒဏ္ဍာရီ, နှင့်အာဏာပွဲစားများ. ဤဖြစ်ရပ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ခံရသင်ဂေါက်သီးအတွက်သူကိုသူ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းဆိုလိုတယ်. ဒီဖြစ်ရပ်အတွက်ဘေးကနေဖြစ်လာနိုင်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပျက်သကဲ့သို့သငျသမိုငျး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါသည်ဆိုလိုတယ်. While there are many ways to get to Augusta for The Masters, the best way to get there is by ridingaprivate jet charter flight from Augusta, ကိုလံဘတ်စ်, Savannah, Atlanta Georgia public or private airport nearby.
2604 Washington Rd, သြဂတ်, GA 30904
When coming over to the biggest golf tournament in the world, you have to arrive there in style. There are many reasons why gettingaprivate jet ride to The Masters isagreat deal not just for you, ဒါပေမယ့်အသီးအသီးလူတစ်ဦးအဘို့အသငျသညျသငျနှငျ့အတူယူပါလိမ့်မယ်.
Your travel time can be significantly shortened if you choose to travel viaachartered private jet. သငျသညျစီးပွားဖြစ်လေယာဉ်စီးသည့်အခါ, သငျသညျထိုကဲ့သို့သောလေယာဉ်ခရီးစဉ်အချိန်များအဖြစ်ကိစ္စရပ်များကျော်မျှထိန်းချုပ်မှုများ, လေဆိပ်အသွားအလာ, နှင့်တူသော. သို့သော်, သငျသညျပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်ကနေတဆင့်သွားလာလျှင်, သငျသညျပိုရှည်ကဖြစ်သင့်သည်ထက်ဝေဟင်ခရီးသွားလုပ်ဤအချက်များဖယ်ရှားပစ်နိုင်ပါတယ်. အပိုဆုအဖြစ်, သင်သည်သင်၏ရွေးချယ်မှုလေဆိပ်ထွက်သွားနှင့်မြေယာဖို့ရှေးခယျြနိုငျ, bringing you closer to both your point of origin and destination. If you want to arrive at Augusta faster than everyone else,aprivate jet charter flight is right for you.
Another major advantage of charteringaprivate jet for your next trip is you can travel at your own pace. စီးပွားဖြစ်ပျံသန်းမှုနှင့်အတူပြဿနာကိုသငျသညျလေကြောင်းကုမ္ပဏီတွေရဲ့လေယာဉ်ခရီးစဉ်အချိန်ဇယား၏ကရုဏာတော်မှာဖြစ်ပါတယ်. လည်း, အဆိုပါမာစတာလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှကြီးမားတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုဆွဲဆောင်တဲ့ကြီးမားတဲ့ဖြစ်ရပ်ကြောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစား, ထိုအဖြစ်အပျက်မှဦးဆောင်-Up အပေါ်သြဂတ်စဖို့လေယာဉ်လာပြီအလွန်ခက်ခဲရနိုင်. သင်တစ်ဦးထိုင်ခုံ secure ချင်လျှင်သင်ကြိုတင်ကောင်းစွာလေယာဉ်အဘို့ဘွတ်ကင်ဖို့ရှိသည်စေခြင်းငှါ,. It is best to bookacharter flight to Augusta if you want to travel to The Masters at your own pace.
Hopping intoaprivate jet is convenient in so many levels. အစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်း, သငျသညျခရီးသှားဖို့ရွေးချယ်လျှင်သင်ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်ကနေတဆင့်ပိုမိုမြန်ဆန်နှင့်သင့်ကိုယ်ပိုင်နှုန်းထားမှာခရီးသွားလာနိုင်. ပုဂ္ဂလိကစင်းလုံးငှားနှင့်အတူ, သင်သည်သင်၏ရှေးခယျြလေဆိပ်မှာထွက်သွားနှင့်ရောက်ရှိမည်ဘယျအခြိနျရှေးခယျြနိုငျ. ဒါဟာသင့်ရဲ့ခရီးသွားအစီအစဉ်အသေးစိတ်ကပိုထိရောက်ဘို့ခွင့်ပြု. တောင်မှပိုကောင်းမမျှော်လင့်ဘဲတစ်ခုခုဖြစ်ပျက်လျှင်သင်ထွက်ခွာ / ဆိုက်ရောက်အချိန်များကိုထိန်းညှိနိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ, သင်တန်းအချို့န့်အသတ်နှင့်အတူ. သငျသညျစီစဉ်ထားထက်အစောပိုင်းသို့မဟုတ်နောက်မှပျံသန်းနိုင်သည်, as long as you coordinate it with your charter.
Private jets are among the most luxurious means of transportation out there. ဤရွေ့ကားလေယာဉ်ခရီးသည်လိုက်မယ်ကြောင်းအင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူတကွနေကြတယ်: ကျယ်ဝန်းထိုင်ခုံ, ခရီးသည်များ၏အရသာများအတွက်စိတ်ကြိုက်အစားအစာနှင့်အချိုရည်, နှင့်မြင့်မားသောအရည်အသွေး On-board ကိုဝန်ဆောင်မှု. Some of the more high-end jets are even decked with luxuries that you can’t find even on first-class commercial flights. Adding to the luxury factor is the incredible privacy riding in such jets provide. If you putapremium in comfort and privacy, thenaprivate jet will provide you exactly that.
Nothing beats the prestige of charteringaprivate jet to your chosen destination. At The Masters, သငျသညျကွဲပြားခြားနားသောလယ်ကွင်းကနေ High-roller အဆင့်မြင့်၌မဆက်ဆံနှင့်မှသြဂတ်၏အစိမ်းရောင်မှာလာရန်မျှော်လင့်ထားနိုင်ပါတယ်, High-လောင်းကြေးဂေါက်သီးအရေးယူ. ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်နှင့်အတူ, သငျသညျစတိုင်အတွက်နေရာမှာရောက်လာနိုင်ပါတယ်. စင်းလုံးငှားလေယာဉ်ခရီးစဉ်မတတ်နိုင်ဖြစ်ခြင်းသည်လည်းသင်တို့အသက်တာ၌ကကြီးတွေဖန်ဆင်းသောကြေညာချက်ပို့ပေး. ပိုတောင်ကောင်းသွားပြီ, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အချိန်ကိုတန်ဖိုးထားကွောငျးဖျောပွသ, အဆင်သင့်ခြင်း, နှင့်မျှမကိစ္စဘာကုန်ကျစရိတ်ဘာမှထဲကအများဆုံးရတဲ့, စီးပွားရေးလောကရှိအပြုသဘောစရိုက်များအရာများမှာ.
With all things considered, အဆိုပါမာစတာသြဂတ်အမျိုးသားဂေါက်ကလပ်ပွဲပြိုင်ပွဲတစ်ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်စင်းလုံးငှားလေယာဉ်ခရီးစဉ်လာပြီတဲ့အကြီးအတှေ့အကွုံမြားဖွစျလိမျ့မညျ, ကမ်ဘာပျေါမှာအကောင်းဆုံးဂေါက်သီးသမိုင်းတွင်အောင်စောင့်ကြည့်နေတဲ့တနင်္ဂနွေမှအပိုမီးမောင်းထိုးပြ. တစ်ဦးပဋိညာဉ်စာတမ်း Get နှင့်ရရှိနိုင်ပါကအကောင်းဆုံးလေကြောင်းခရီးသွားအတွေ့အကြုံကိုတွေ့ကြုံခံစား ဂျော်ဂျီယာပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်လေယာဉ်တင်စင်းလုံးငှား သငျသညျအနီးမဆိုလေဆိပ်မှာအငှားဝန်ဆောင်မှု.
သင်က Add ကိုကူညီပါတံ့သော Amazing နယူးဂေါက်သီး Swing ပြင်ဆင်ခြင်းရှာဖွေတွေ့ရှိ 30+ သင့်ရဲ့ Drive ကိုထိုနီးပါးသင့် Game ဖွစျပှားနင့်ဒါကသင့်ရဲ့နံပါတ်တစ်ခုမှာပြဿနာပပျောက်ရေးကိုက်! ဒီနေရာမှာသွားပါ https://www.wysluxury.com/GolfSwing
Sergio Garcia Winning Putt at the Masters Tournament 2017 - သြဂတ်အမျိုးသား - သင်တန်းကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း